Puntland oo dalacsiiday Sarkaal sheegay in uu la noolyahay Cudurka Adis-ka. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Puntland oo dalacsiiday Sarkaal sheegay in uu la noolyahay Cudurka Adis-ka.
Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Puntland, Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta Garoowe kaga qayb galay xuska maalinta Cudurka dilaaga ah Aids-ka Adduunka oo ku beegan December, 01 sanad walba, waxaana laga xusaa maalintani adduunka oo dhan.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa dalacsiiyay Kabtan Bashiir Cismaan Cawed oo dhawaan si aan ka ganbasha lahayn u sheegay in uu la noolyahay cudurka HIV Adis-ka oo ay ku riday Xaas uu qabay sida uu sheegay.
Waxaan hortiina ka cadaynayaa in Kabtan Bashiir Cismaan Cawed aan u dalacsiinay GAASHAANLE, wuxuu ku mutaystay kartidiisa iyo bulshadiisa oo uu wacyi-geliyey” Ayuu yiri Karaash.
“Waxaan maqlijirey berigii hore dadka oo faquuqa qofka qaba Qaaxada, beryo kadib waxaa cadaatay inaanu waxba ahayn, HIV-guna waa sidaas. Waxaan idiin sheegaynaa in qofka faquuqsameeya inaan u aqoonsandoono inuu yahay Dambiile go’aanna waan kasoo saaraynaa ka dowlad ahaan. Waxaan farayaa Hay’adda PAC inay caawiyaan qofkasta oo aan awoodin daawada inuu qaato, waxaan dhowaan soo saaraynaa xeerka lagu dhiqidoona xanuunkan,Ayuu hadalkiisa raaciyay Axmed Cilmi Cismaan Karaash ku xigeenka Madaxweynaha Puntland.
Axmed Karaash ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay ka qayb galka xuska maalintani, Madaxweynaha ayaa sheegay in Maamulkiisu soo saaridoonto xeerka xanuunkani, waxaana uu Kabtan Bashiir Cismaan Cawad oo kamid ah ciidanka Booliska Puntland, lana nool xanuunkani u dalacsiiyey Gaashaanle.
Hay’adda Puntland u qaabilsan la dagaalanka AIDska ee magaceeda loosoo gaabiyo PAC, ayaa maanta shaacisay in sanadkan 56 qof laga heley Viruska HIV/Aids-ka.
Celcelis ahaan 486 qof oo la nool cudurkaan ayaa ka diiwaan gashan Puntland, kuwaas oo si joogto ah u qaata dawooyin kaalmaati ah, sida lagu sheegay xuska maalinta AIDska oo Garowe ka dhacday.
Hay’adda PAC waxay sheegtay fiditaanka cudurkaan inaanu weli dhaafsiisnayn 1%, inkastoo ay ka digtay.
Xaflada waxaa qeyb galay dad cudurkaan la nool oo maalmihii ugu dambeeyay kasoo muuqanayay warbaahinta iyo baraha bulshada iyaga oo dadka ka wacyigalinaayay.
Previous articleWararkii Ugu danbeeyey Boosaaso Dhaqdhaqaaq Xukumada Deni Looga Soo horjeedo.
Next articleXOG: Axmed Madoobe Oo Khilaafka Siciid Dani Kala dhaxeeya Ay Soo fara geliyeen…
hassan December 2, 2019 At 9:25 am
inan gumeed xun xageed ka keentay kalmada (dalacsiiday)
gun baad tahay
DAAWO VIDEO: Puntland oo sheegtay in aysan Aqbali doonin RW Cusub...